Allgedo.com » 2012 » October » 15
Home » Archive Daily October 15th, 2012
Habraaca Kalsooni siinta Dawladda – By Abdulkadir Mohamed Tahlil
Workshop uu Ururka SEDO ku qabtay Degmada Garbahaarey (Sawiro)
Kulan looga tashanayey sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarshada Degmada Garbahaarey ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Dugsi sare Amiirnuur, waxaa ka soo qayb galay bulshada noocyadeeda kala duwan sida: qaar ka mid ah Maammulayaasha iyo macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ee ku yaallo degmada G/haarey, macallimiinta iyo guddiga Dugsiga Sare Amiirnuur, qayb ka mid ah ardada wax ka barato dugsira...
VOA Horn of Africa director BBC East Africa Bureau BBC/VOA Somali service: Reality vs. falsehood Excellencies’ Modern media, especially the internet, cable TV, and even radio, can receive and disseminate information very quickly. This makes the world a more connected place, and helps the public to be better informed. It also gives people more access to ideas, opinions, and news from many different...
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka waxaa la ogeysiinayaa in Oct. 27, 2012 la qaban doono xaflad lagu taageerayo dowladda Soomaaliya
Waxaa dhamaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka la ogaysiinayaa in Xaflad balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada soomaaliyeed ee degan Gobalka Hessen ee wadanka Jarmalka la qabanayo maalinta Sabtida ah ee ay Taariikhdu tahay 27.10.2012, waxaan lagu qaban doona Hoolka xafladaha iyo bandhigyada ee magaalada Groß Gerau. Xafladan oo ka kooban barnaamijyo baalaran oo ay shacabka...
Degmo cusub oo kusoo biirtay gobolka Banaadir, iyo degmadaas oo caawa dagaalo soo dhaweysay
Waxaa degmooyinka gobolka Banaadir kusoo biirtay degmo cusub taas oo qeyb ka noqonaysa 16-ka degmo ee gobolka. Degmada kusoo korortay gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu magacaabaa Kaxda waxaana ay kutaal duleedka Magaaladda Muqdisho gaar ahaan dhanka degmada Dharkeenley. Masuuliyiin katirsan gobolka Banaadir ayaa ka qeyb galay munaasadii lagu magacaabayay degmadaas. Gobolka Banaadir ayaa hada waxaa...
Kulan lagu taageerayay Ra’isul Wasaare Dr Saacid oo ka dhacay gobolka Gedo
Kulan balaaran oo lagu taageerayay Ra’isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr C/Faarax Shiikh-doon ayaa maanta ka dhacay magaaladda Luuq ee gobolka Gedo. Guddoomiyaha degmada Luuq, Cabdullaahi Kureedow ayaa ka qeyb galay isu soo bax lagu taageerayay Ra’isul Wasaare Dr Saacid. “Waxaan ku faraxsanahay in Ra’isul wasaare loo magacaabo Dr SAACID Maxaa yeelay waa nin howlkar ah oo...
Dukaamo badan ayaa ku gubtay dab ka kacay Xerada Xagar-dheer
Xerada Xagar-dheer oo kamid ah xerooyinka Dhadhaab ayaa waxaa maanta ka holcay dab xooggan oo qasaro gaystay. Dabkan ayaa waxaa uu kacay maqribkii caawa waxaana uu gubay ilaa 15 Dukaamo ganacsi ah oo kuyaal xerada Xagar-dheer.. Dad kusugan xeradaas ayaa warbaahinta AOL usheegay in dukaamada gubtay ay kamid yihiin kuwa shopin ah, kuwa bagaash ah, Baqaaro iyo goobo time jare ah. Waxaa daminta dabkaas...
Wararkii ugu danbeeyay ee dagaal iyo qaraxyo ka dhacay Magaaladda Kismaayo
Iska horimaad kooban ayaa magaaladda Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ku dhexmaray ciidamada dowlada Soomaaliya iyo maleeshiyaad hubaysan. Dagaalka ayaa ka dhacay gudaha magaaladda, waxaana uu soconayay ilaa 30 daqiiqo. Lama Oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan hase ahaatee saraakiil katirsan ciidamada dowlada ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid kooban oo kooxo ay ku sheegeen nabad...
Al-Shabaab oo gudaha ugalay Muqdisho iyo hugunka Madaafiicda oo si weyn loo maqlay
Dagaal xooggan ayaa xalay ka dhacay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir, kadib markii ciidamo katirsan Shabaab ay weerar soo qaadeen. Ciidamo hubaysan oo Shabaab ah ayaa qeybo kamid ah magaaladda ka fuliyay dagaal la isku adeegsaday hub aad uculus. Ku dhawaad 7 kamid ah dhinacyada dagaalamay ayaa lasoo sheegayaa in ay geeriyoodeen kuwa kalana ay dhaawacmeen. Dadka deegaanka ayaa Warbaahinta AOL...
Pro Jawaari: qaab fartaag ah ayaa loogu codeynayaa Ra’isul Wasaaraha
Gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya Pro Maxamed Sh Cismaan Jawaari ayaa faah faahin ka bixiyay qaabka ay udhacayso ansixinta Ra’isul Wasaaraha. Waxaa uu sheegay in si dadka ay uwada jeedaan loo ansixin doono Ra’isul Wasaaraha. “Qaabka ansixinta Ra’isul Wasaaraha waxaa ay noqon doontaa mid cad oo gacan taag ah maadaama xildhibaanada ay matalayaan shacabka’ayuu yiri Pro Jawaari...